Sidee Bay Noloshu Ahayd Google Kahor? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
BBC Somali — August 1, 2018
Caadi ma tahay in aan bisaddayda ka dhigo mid khudaarta cunta? Waa sidee carafta ilmaha yar? Muxuu yahay jacayl? Qaar ka mid ah su’aalaha la weydiiyo Google. Tan iyo markii la aasaasay 20 sano ka hor, Google wuxuu jawaabo u helay su’aalaha la weydiiyo badidood, wuxuu noqday fal (verb), Arbacadiina waxaa la dul dhigay 5 Bilayn oo ganaax ah, ka dib markii uu ka yara dheereeyey qolyaha kale ee uu xafiiltanku kala dhaxeeyo.
Gareth Hughes wuxuu ahaa weriye ka shaqaynayey wargeyska maalinlaha ee Daily Post newspaper ee ka soo baxa North Wales, 1974 – 2006.
Gareth Hughes oo dul fadhiya makiinadiisii teebka
“Waxaan ku khasbanaa in aan wax ka qoro arrimo badan oo aysan cidna iga filayn inaan wax ka garanayo” ayuu yiri. “Waxaa isticmaali jiray buugaagta loo yaqaanno Encyclopaedia iyo maktabadda, laakiin arrinta muhiimka ah waa in aan aqaannay cidda taqaanna waxa xaqiiqda ah, iyo aqoonta aan u leeyahay cidda ayaga garanaysa. Waxaan jeclaa in aan ka fekero in uu jiro qof aan aqaanno oo ay isku tuulo ku nool yihiin”.
“Sidoo kale, wax walba waan haayey. Waxaa xusuustaa sheeko ku saabsan ilmo yar oo ku dhashay meel fog xilli qaboobe ah. Waxaa lagu duubay maryo suuf ka samaysan si qabowga looga ilaaliyo, ayadoo gaariga gargaarka degdegga ahna uu si tartiib ah barafka u soo dhex marayey. Isma lahayn way badbaadaysaa.
“Lix bilood ka dib markii isbitaalka laga soo saaray ayaan sheekada qoray. Toban sano ka dib ayey mar kale sheekadii iga soo hor baxday. Mar kale ayaan arkay isla sheekadii, in yar ka hor sannad guuradeedi 21aad, waxaan wacay xafiiska boostada ee ii dhawaa, waxaana ii soo baxday in aysanba ka fogayn xafiiskayga.
“In Google uu soo baxay waayihii dambe way fiicnayd, laakiin ma jirto wax la barbar dhigi karo xiriirkaas shaqsiga ah”.
Hilary Heilbron QC waxay billowday inay qareeennimo ku shaqayso ayadoo dhallinyar 1972. Waxay iminka ka shaqaysaa hay’adda ugu sarraysa ee qareennada Britain, waxayna ku takhasusutay qareennimada shuruucda ganacsiga iyo dacwadaha caalamiga ah.
“ka qareen dhallinyar ahaan, waxaa lagu siinayaa tilmaamo shaqo, waana in aad adigu samayso cilmi baaristaada, adigoo isticmaalaya warbixinno sharci, buugag, iyo maktabado. Xataa waa in aad akhrisaa kiisas kale.
Waa gallad eebbe in wakhti uu kuu badbaaday, laakinse wakhtigaas badna, maadaama macluumaad badan ay kuu yaallaan, kuwaasoo ka badan intii hore loo heli jiray. Sidaa darteed waa in aad hubisaa, waana in aad taxadartaa”.
Tobanaan sano ka hor, shaqaalaha maktabadda dadweynaha ee New York waxay u shaqayn jireen sidii Google oo bani’aadmi ah, ayagoo su’aalo weydiin jiray dadweynaha, si ay uga jawaabaan macluumaadka badan ee ay hayaan.
Sannadihii dhawaa, waxay shaqaaluhu sameeyeen sanduuq lagu rido kaararka su’aalaha dadweynaha, kuwaasoo lagu wadaago barta Instagramee maktabadda.
Dadkii joogay 1949 su’aalo yaab leh ayey iska weydiin jireen xayawaanka. Google wuxuu 2018 leeyahay eeen, ma jirto cid dhab ahaantii si hubaal ah u ogsoon.
“Google wax walba wuu beddelay. Micnaheedu waa in aan heli karo macluumaad anigoo aysan iga khasaarin maalin dhan oo aan aado maktabad ama matxaf, waxaanan shaqadayda u qaban karaa si waxtar leh. Waxaan hoos u dhigay wakhtiga aan u baahnahay in aan cilmi baaris sameeyo 80%.
“Waa qaab shaqo oo gebi ahaanba ka duwan sidii hore. Waxaan ka shaqayn karaa wax aanan ka haysan akhbaar badan.
“Laakinse weli waa muhiim in lagu xirnaado maktabadaha, marka laga hadlayo qofka iyo koboca aqoontiisana, qiime weyn ayaa arrintaas ku jira. In aad Internetka ku shaqayso waa sidii adigoo dadka iska soocay”.
Tags: Sidee Bay Noloshu Ahayd Google Kahor?
Next post Waa Siddee Tayada Jaamacadaha Soomaaliya?
Previous post Waa Maxay Uuryaal?